I-beta ye-Android Pie ifikelela kwi-OnePlus 3 kunye ne-3T eYurophu | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ngexesha elithile elidlulileyo kwabhengezwa ukuba I-Android Pie yayiza kuphehlelelwa i-OnePlus 3 kunye ne-3T. Kutshanje i-beta yayisele isungulwe ngokusemthethweni e-China. Nangona ngomhla wayo akukho nto ikhankanyiweyo malunga nokukhutshwa kohlaziyo eYurophu. Ngethamsanqa, oku kuyenzeka ngoku, kuba le beta isungulwe ngokusesikweni kwilizwekazi laseYurophu.
Yinto eyenzeke izolo. Uhlaziyo kwiPie yePie kwezi zimbini ze-OnePlus 3 kunye ne-3T sele ithunyelwe eYurophu. Ke abasebenzisi abanayo nayiphi na le modeli sele benofikelelo kuyo ngokusemthethweni. Into esele ilindelwe ngabaninzi.
Olu luBeta loLuntu, ayiziswanga nge-OTA Njengolunye uhlaziyo. Kodwa abasebenzisi ngabo ekufuneka beyikhuphele ngesandla kwi-OnePlus 3 yabo okanye i-3T kule meko. Nangona yinkqubo engabonisi iingxaki.
Yinto engaqhelekanga ngophawu, kuba kwiimodeli zayo zamva nje le Beta yoLuntu inqabile ukubonwa. Kodwa kuyo nayiphi na imeko, siyayibona loo nto Ubuncinci i-Android Pie sele ikhutshelwe ezi fowuni. Uhlaziyo abasebenzisi abalindileyo ukusukela ekuqaleni konyaka.
Njengoko besesitshilo, Abanini be-OnePlus 3 okanye i-3T kufuneka nje bakhuphele i-beta ebuzwayo emnxebeni. Ngale nto, inkampani sele ibeke amakhonkco onawo, ukuze ukwazi ukuyifaka kwifowuni yakho. Kungenzeka kwezi zixhumanisi:
I-Beta yoLuntu ye-OnePlus 3
Uluntu lweBeta kwi-OnePlus 3T
Ngelo xesha asazi ukuba inguqulelo ezinzileyo ye-Android Pie iya kukhutshwa nini kuzo zombini ezi fowuni. Kuya kufuneka silinde kwaye sibone ukuba le beta isebenza kakuhle. Ukuba zimbalwa iingxaki kule meko, baya kufumana ingxelo ezinzileyo ngokukhawuleza okukhulu. Siza kuphaphama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » I-OnePlus 3 kunye ne-3T zifumana iPie ye-Android 9 eYurophu
IGolden Fold iyimpumelelo ekubhukeni